トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Guushaas Sida loo Hanemono-Dejihane (fikradaha aasaasiga ah)
pachinko Recent, tan iyo mashiinka Todobo ayaa noqday arrin, waxaan u malaynayaa in ay galaan xataa kuwii aan wax ogayn waxa uu ku sheegay in ay Hanemono. Qaar ka mid ah kuwa wax yaqaanna, Hanemono waa in ay heshay wax ka yar, waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay u malaynayaan in aysan awoodin in ay ku guuleystaan.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad ogtahay qayb ka mid ah si loo ogaado si ay sidoo kale ku guuleysan Hanemono, waxaad weli ku guuleysan karto soo baxa.
First of dhan, ka dibna sharaxaad ka mid ah Hanemono ah. Hanemono The, markii kubad uu soo galo mid ka mid shot meel gaar ah, baalasha wax dabeecadda furi doonaa in wajiga of xarunta guddiga. Qaar ka mid ah shayga qof, saddex-dalool furan yahay, noqon Xaqiijisay a hit weyn haddii kubada galo dhexe oo iyaga ka mid noqon doonaa Hanemono.
dhawaan, laakiin waa Hanemono in mar dambe ma arki karo, haddii ay jiraan waa wax haddii sida ay guusha sida, waxaan doonayaa in aan arko. Hanemono waa wax ay u badan tahay in ay saameeyaan musmaarrada beddelo in ka badan toddoba mashiinka. Haddii aan ka fekero badisay
Hanemono, waxaa loo baahan yahay in ay eegaan sixitaanka dhidibkii. Marka aan u tageen inay lid ku ah, Haddii aad tahay sixitaanka dhidib ah, suurtogalnimada inuu ku guuleysto in ka badan toddoba mashiinka la odhan karaa in ay sare. Haddaba, waxaan soo bandhigi doonaa meesha uu sixitaanka ciddiyaha aad rabto inaad aragto si uu u guuleysto.
First of dhan, waa sixitaanka dhidib u dhow ee chucker bilowga ugu muhiimsan. Near bilowga ,: labada dhinac waa, kuwa u furan yihiin waa dabcan faa'iidada badan. Tani waa dabiiciga ah ee sheekada dhidib wanaagsan ee u dhow ee chucker bilowga furan yahay, laakiin mid ka mid kale, in sida ay muhiim u dhow bilowga, waa sixitaanka dhidib ka mid ah yeedhay hakama sare ee ciddiyaha bilowga ah.
ciddiyaha this, iyo kor u eegay, maadaama ay tahay farqiga u dhexeeya chucker bilowga, fududaan doonta in ay xakameeyaan kubada. Haddii aad tahay sixitaanka ciddiyaha qaybo yeedhay hakama ah, waa in inkastoo adkeeyay bilaabaan wax yar ka badan, u badan tahay in ay galaan bilowga. Waxaan qabaa
heshay yar ilaa luqunta, waxaan laga yaabaa in dadka qaarkood ay ka fogaaday, laakiin marka la barbar dhigo mishiinka Todobo, taas oo u fudud in ay ku dhuftay wanaagsan oo Hanemono. maal-yar In caasimadda, inuu u ciyaaro deeruhu iska, maxaa yeelay dheelitirka ah mid deggan fudud, yar ay heshay wax yar ka badan waxay aaminsan yihiin in la doonayo in la kordhiyo.
qabashada laga sameeyey oo ciddiyaha sixitaanka, mar fadhiya miiska sixitaanka dhidib wanaagsan, waxa kaliya ku dhufan ka dib. Haddii meeleeyay bilow, haddii lagu rido hit a in la furo baalasheeda, sababtoo ah kubada baxay ayay ku guuleysan karto, iyo toddoba mashiinada waxaa gacanta wax walba oo barnaamijka, waxaan qabaa xiiso iyo kala duwan dhadhamin karaa.
hal mar, heshay a qadar weyn waa waxaan aan laga fili karo, ilaa iyo inta play maalin maalmaha ka mid ah, waxaan u malaynayaa in si tartiib tartiib ah ku guuleysan muddo dheer. Life of Hanemono waa sixitaanka dhidib ah. Haddii aan xusuusan waxa keliya, waqti yar ka qaadan doonaa, ayaa sheegay in si fudud ku guuleysan model ah marka la barbar dhigo Toddoba mashiinka.
dhawaan, waxaan laga yaabaa in aadan arkin aad u badan, waxaa jira in agagaarkeedii sida tii pachinko in ku adkeeyey badan oo, sida miiska loo isticmaalo. Xitaa kuwa neceb, dhibic inay ku guuleystaan, maxaa yeelay, sixitaanka ciddiyaha oo keliya, isku day in aad mar u ciyaaro si walba.